Yechina Veruzhinji Beta yeIOS 11 inosvika kune vese vashandisi | IPhone nhau
Yechina Ruzhinji Beta yeIOS 11 inosvika kune vese vashandisi
Iyo iOS 11 Betas ine njodzi, uye ivo vanodhakwa kunyangwe paine chokwadi chekuti ivo vachatipa isu zvakanyanya kutemwa nemusoro kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Kunyange zvakadaro, iyo Cupertino kambani inoziva kuti vazhinji uye vazhinji vashandisi vanoda kuenda kumberi kana zvasvika kune iOSNdosaka yakatanga chirongwa chePublic Beta, icho vashandisi vese vanogona kuyedza iyo iOS Betas pasina zvinetswa.
Isu tiri mukuzara kuzere kweIOS, uye tinotarisira kuti mune rinopfuura mwedzi tinogona kunakidzwa neshanduro yayo yekupedzisira, ndosaka Nezuro isu takaziva nezve iyo Beta 5 iOS 5 Vagadziri uye nhasi Apple yatanga Ruzhinji Beta 4 iyo musimboti yakafanana zvachose. Ngatitarisei izvo zvitsva muBeta.
Iyo yekuvandudza haina kunyanya kurema, uye kana iwe uchinge uchinge uine Ruzhinji Beta chimiro chakaiswa, iwe unongofanirwa kuenda kuchikamu cheMisimboti uye enda kune General> Software Kwidziridzo kukwanisa kunakirwa yazvino vhezheni yeanoshanda system iyo iyo Cupertino kambani yawakagadzirira iwe. Nekudaro, isu hatishaye mukana wekurangarira kuti kushandisa Betas yeanoshanda system kazhinji haina kugadzikana, uye haina kukurudzirwa kune avo vanoita iyo iPhone, semuenzaniso, yavo yezuva nezuva yekushandisa turu.
Nenzira imwecheteyo, unogona kushamisika zvatinoziva nezve iyi Beta yeIOS 11, uye chokwadi ndechekuti hapana, nekuti Apple kazhinji inosanganisira pfupi gadziriso. Asi isu tinoziva kuti pane zvakawanda zvirimo muchimiro chekuchinja kune graphical interface. Nekudaro, iyo bhatiri kuita ichiri yakaderera chaizvo. Kana iwe uchida kuziva zvese nezve nhau dzeiyi yazvino Beta, mangwana isu tichavhura muunganidzwa pamwe nehutachiona hunouya nekuenda muIOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Yechina Ruzhinji Beta yeIOS 11 inosvika kune vese vashandisi
Instagram iri kuyedza kutenderera kuripo pakati pevanhu vaviri
Mapateni matsva anoshandura iyo iPhone kuita chokurapa